Haddii aad tahay qof dumar ah oo ku jira da'da taranka, waad mari kartaa dayska meel cayiman. Laakiin dad badan ayaa qaba welwel sida "goorma ayay caadadu iga bilaaban doontaa?" iyo "calaamadaha aan filan karo xilliga caadada? Kuwani waa su'aalo aad u fiican, oo OB/GYN -ta loo tababaray Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa kaa caawin kara inay adiga kuu jawaabaan.
Runtu waxay tahay in haweenku ay maraan isbeddello badan xilliga caadada, oo ay ku jiraan isbeddellada niyadda, miisaanka oo kordha, iyo gubasho kulul. La -talin dhammaystiran ayaa haweenka ka caawin karta inay u diyaargaroobaan astaamaha caadada, inay si fiican u fahmaan isbeddelladaan, iyo inay u gudbaan marxaladdan cusub ee nolosha inay noqoto mid la maareyn karo. Call shaqaalahayaga Columbus, Dublin, ama Westerville, OH si ay wax uga ogaadaan adeegyadayada xagga daryeelka menopause iyo beddelidda hoormoonka.
Goorma ayay caadadu bilaabantaa?
Menopause waa qayb ka mid ah geedi socodka gabowga caadiga ah ee dumarka waxayna guud ahaan dhacdaa inta u dhaxaysa 45 ilaa 55. Waxay bilaabmaysaa marka ugxan -yarihu joojiyaan soo saarista estrogen iyo progesterone, taas oo keenta dhammaadka wareegga taranka dumarka. Sababtoo ah hormoonnada is -bedbeddelaya, ma aha wax aan caadi ahayn in lala kulmo olol kulul, dhidid habeenkii, qallayl siilka, niyad -jabka, iyo walaaca.
Sideen ku ogaanayaa haddii aan ku jiro caadada?
Qaar ka mid ah calaamadaha ugu horreeya ee dhalmo -daysku waa hilaac kulul iyo dhididka habeenkii. Waxaad kaloo ogaan kartaa in wareegga caadadaadu ay noqotay mid aan joogto ahayn ama gebi ahaanba la joojiyay. Haddii aad dareento isbeddelo ku dhaca caadadaada, waxaa muhiim ah inaad aragto OB/GYN khibrad u leh ogaanshaha cudurka. Bukaanada qaba caadadii waa la soo dhaweynayaa inay la hadlaan mid ka mid ah xirfadleyaasheena si ay ula taliyaan.
Maxaa dhacaya inta lagu jiro ballanka la -talinta dhalmo -dayska?
Xirfadlayaasha Caafimaadka Dumarka ayaa ku faanaya inay bixiyaan la -talinta caadada ka tagta si bukaannadu u maamuli karaan astaamaha oo ay ugu dareemi karaan raaxo badan jirkooda is -beddelaya. Waan ka jawaabi karnaa su'aalahaaga oo aan samayn karnaa qiimeyn caafimaad ka hor intaanan sameyn qorshe. Waan fahamsanahay inay adkaan karto in laga hadlo caadada iyo caafimaadka galmada, waana sababta shaqaalahayaga Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH ay ugu hoggaansamaan siyaasad qarsoodi oo adag.
Ma jirtaa hab lagu yareeyo astaamaha menopause?
Daawooyinka guriga qaarkood ayaa lagu yaqaan inay yareeyaan astaamaha menopause ee fudud ilaa dhexdhexaad ah. Tusaale ahaan, inaad qolkaaga jiifka ku hayso qabow iyo biyo la cabbo ka hor waxay kaa caawin kartaa inaad si fiican u seexato dhididka habeenkii. Si kastaba ha noqotee, haddii astaamuhu ay carqaladeeyaan tayada noloshaada iyo waxqabadyada maalinlaha ah, waxaa fiican inaad u jeesato OB/GYN si aad u hesho xalal waara.
Daaweynta beddelidda hormoonka (HRT) waa xeelad dib ugu soo celisa hormoonnadaada heerar caadi ah. Dumarku guud ahaan waxay bilaabaan daaweynta iyagoo qaadanaya qiyaas yar oo estrogen ah muddo gaaban, laakiin qorshayaasha HRT waa la shaqsiyeeyay iyadoo lagu saleynayo baahiyahaaga iyo astaamahaaga. Haddii loo baahdo, waxaan had iyo jeer hagaajin karnaa qiyaasta hormoonkaaga.
Waa maxay natiijooyinka HRT?
HRT waxaa loo caddeeyay inay hagaajiso niyadda, libido, waxqabadka galmada, tayada hurdada, iyo heerarka feejignaanta. Daaweyntu waxay kaloo yareyn kartaa halista osteoporosis iyo cudurada wadnaha, oo labaduba ah xaalado caadi ah oo la xiriira menopause. Haddii aad ku dhowdahay menopause, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad jadwalka la -talinta la samaysato Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka.
Si raaxo leh ugu noolow caadada
Menopause waa qayb dabiici ah oo nolosha ka mid ah. Waxay ku dhacdaa qof walba, mana aha wax laga baqo ama laga xishoodo! Xirfadlayaasha Caafimaadka Dumarka ayaa kaa caawin kara inaad ogaato sida ugu wanaagsan ee aad naftaada u taageeri karto xilligan kala -guurka ah adigoo siinaya la -talinta menopause iyo daaweynta beddelidda hoormoonka. Ma u baahan tahay talo ku saabsan daaweynta saxda ah ee baahiyahaaga gaarka ah? Ma rabtaa xoogaa fikrado ah oo ku saabsan isbeddellada hab -nololeedka ee fudud oo yareyn kara raaxo -darrada? Naga soo wac Columbus, Dublin, ama Westerville, OH.
Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville Daryeelka menopause